आफुमाथि यति गम्भीर आरोप लागेका बेला चिनियाँ राजदुतले किन भेटिन प्रचण्ड ? यस्तो छ कारण — Imandarmedia.com
आफुमाथि यति गम्भीर आरोप लागेका बेला चिनियाँ राजदुतले किन भेटिन प्रचण्ड ? यस्तो छ कारण
काठमाडाैं । सत्तारुढ दल नेकपाभित्र शक्ति संघर्ष चलिरहेको बेला भेटघाट श्रृंखला सुरु गरेकी चिनियाँ राजदुत होउ यान्छीले बिहीबार पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सँग भेटवार्ता गरेकी छन् । नेकपाको आन्तरिक विवाद मिलाउन सक्रिय रहेको आरोप लागेका बेला उनले प्रचण्डलाई भेटेकी हुन् ।
यसैबीच नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा जारी गरेकोप्रति भारतले औपचारिक कूटनीतिक पत्र पठाएर विरोध जनाएको खुलेको छ । भारत सरकारले नेपाललाई कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाएको बारे सरकारले औपचारिक जानकारी दिएको थिएन ।
‘भारतले नेपाली भूमिलाई उसको नक्सामा राखेपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतसँग वार्ताका लागि तीनपटक चिठी लेखेको रहेछ । जसमा भारतले कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिएको पाइएको छ,’ बिडारीले भने, ‘नेपालले नक्सा जारी गरेपछि भने भारतले असार १० गते कूटनीतिक नोट लेखेर विरोध गरेको जानकारी परराष्ट्रले दिएको छ ।’
नेपालसँग वार्ता टार्दै आएको भारतले लिपुलेक भएर सडक निर्माण गरेपछि भने नेपालले नक्सा जारी गरेको थियो । नेपाल सरकारले जेठ ७ गते नक्सा जारी गरेको थियो । नेपालले नक्सा जारी गरेको एक महिनापछि भारतले कूटनीतिक नोट पठाएको हो ।